अहिले ओलीलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन : रामचन्द्र पौडेल - Sawal Nepal
Trending #corona #कोरोना #covid19 #कोरोना संक्रमित #राशिफल #corona negative #Corona virus #budget
अहिले ओलीलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन : रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौँ सवालनेपाल २०७७ फाल्गुन १२, १९:२२
१२ फागुन, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरे यता उनी संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मात्र उभिएनन्, मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिवाद समेत गरे ।
सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि पौडेलले देशलाई संकटबाट जोगिएको बताएका छन् । अब पुनर्स्थापित संसदमा कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ? सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुन्न ? यसै सन्दर्भमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसद पुनर्स्थापनालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको भावना र मर्म अनुरुप फैसला गरेर देशलाई ठूलो संकटबाट बचाएको छ । अनिश्चय र अस्थिरताबाट बचाएको छ । मैले त्यही रुपमा बुझेको छु ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि अब नयाँ सरकार बन्ने होला, कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?
भोलि पार्टीको बैठक बस्दैछ, त्यहाँ यो विषयमा छलफल गर्छौं । हामीलाई जनताले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने म्यान्डेड दिएको छैन । संसदीय प्रणाली जोगाउनु पनि छ ।
(नेकपा) का ९० जना सांसदले एकथरि कप्रस्ताव गरेका छन् । बाँकी ८० जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले सत्ताको लालच देखाउनुहुन्न ।
लोकतन्त्र कसरी स्थिर हुन्छ ? संसदीय प्रणाली कसरी राम्रोसँग चल्छ ? भनेर हेर्नुपर्छ । कता लागेर कुर्सी पाउँछौ भन्ने नहेरौं । दुईमध्ये कसले ठीक ढंगले चुनाव गराउँछन् ? कसले राम्रोसँग देश चलाउँछन् ? यो समयमा चुनाव गराउँछु भन्दा को सहमत हुन्छन् ? त्यसलाई फ्लोरबाट सपोर्ट गर्न पनि सकिन्छ ।
हामीले त चुनाव जितेर आएपछि आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ । नभए विकृति र विसंगति हुन्छ । त्यसमा फस्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
त्यो भनेको प्रचण्ड–माधव समूहलाई समर्थन गर्ने हो कि ?
हामी अहिले यसलाई या त्यसलाई भन्दैनौं । तर हामी संसदीय प्रणालीको पक्षमा हौं । संसदीय प्रकृयालाई अगाडि बढाएर चुनावमा पुर्‍याउन कसले राम्रो योजना प्रस्तुत गर्छ, हाम्रो सहयोग उत्तैपट्टी हुन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि ओलीले जुन कदम चाले, जस्तो क्रियाकलाप देखिए, अहिले उनलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
यो भनेको त प्रचण्ड–माधव समूहलाई सहयोग गर्ने भयो होइन र ?
उहाँहरुसँग पनि कुरा गर्छौं, उहाँको योजना र कार्यक्रम हेर्छौं । उहाँहरुले कसरी अगाडि लानुहुन्छ ? कहिले चुनाव गराउनुहुन्छ ? त्यो सबै कुरा हेरेर मात्र निर्णय गर्छौं ।
अल्पमतको सरकार चलाउन दिने सम्भावना पनि छ ?
हामी संसदीय प्रणालीको पक्षमा छौं । बाँकी कुरा बैठकमै छलफल हुन्छ ।
कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ ?
अहिले हामीले त्यतातिर सोचेका छैनौं, त्यसैले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने नै छैन । सरकारमा जाने नजाने निधो पनि छैन । त्यसैले अहिले त्यो कुरा भन्न सकिन्न ।
पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्छौं । आन्तरिक छलफलमा आउने कुरा अहिले नभनिहालौं ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ नि ?
उहाँ चुनावको तयारीमा पनि हुनुहुन्थ्यो नि । उहाँ त यस्तै हो ।
तर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने असंवैधानिक रुपमा हुन लागेको चुनावको तयारी गर्नुभएका देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नैतिक रुपमा मिल्छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कि पार्टीमा सरकारमा जाने नजाने बिषयमा छलफल भएकै छैन । बाँकी रह्यो देउवाजीमाथिको आरोप । जनतामा गलतफहमी छ भने त्यसलाई हटाउने काम पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ ।
ओली-महन्थ गठबन्धनको प्रयास सकारात्मक मोडतर्फ, सत्ता समिकरणको तयारी
चार मन्त्रीको सांसद पद सकिँदै
पत्रकार महासंघ झापाको अध्यक्षमा एकराज गरी सहित प्यानलै विजयी
३ साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा छलफल,आज साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
सुकुटेमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
सोमबार यी काम गर्नूस्, फलिफाप हुनेछ !
हेटौंडामा करेन्ट लागेर एकै परिवारका दुईको मृत्यु
पूर्वराजाले भारतमा भने– हामीले हाम्रो हिन्दु धर्म बचाउनु छ